Ninkii dugsiga sare ku dhacay ee maalqabeenka noqday - BBC News Somali
Lahaanshaha sawirka ROBIN HUTSON
Image caption Robin Hutson waxa uu heer ka gaaray shaqada hoteellada
" Waxaan ku dhacay dhammaan maadooyinkaygii dugsiga sare, mana ii suurto galin inaan jaamacad ku biiro" ayuu yiri ninkas 62 jirka ah. "sidaas darteed waxaan isku dayey in aan raadiyo wax kale oo aan ka shaqeeyo"
"Barigii aan 16 jirka ahaa ma aanan xiisayn jirin haasaawaha hablaha, hooyadayna waxay oran jirtay, waliigaa waxaad jeclayd inaad madbakha dhex meeraysato".
Image caption Si ay u daahfuraan hoteelkii ugu horreeyey ee du Vin, Robin iyo xaaskiisa Judy waxa ay rahaamad u dhigeen gurigoodii.
Haatan waxa uu lix Xarumood oo shaqo ku leeyahay Koonfurta England, waxayna sharikaddiisa oo ku hawlgasha magaca - Home Grown Hotels - usoo xarooda sanadkii lacag gaaraysa £20m.
Markii la arkay xirfadda guulaysatay ee Robin ayaa loo aqoonsaday "ninka ugu saamaynta badan Britain ee dhanka hoteellada". Waayo loogama baran shaqo xumo.
Lahaanshaha sawirka HOME GROWN HOTELS
Waxa uu dib ugu laabtay London, asagoo da'diisu ahayd 23 jir, waxa uuna noqday qofkii ugu da'da yaraa ee maamule ka noqda hoteelka Berkeley.
Waxa uu dib ugu laabtay UK waxaana loo soo bandhigay in uu noqdo maareeyaha guud ee hoteelka Hampshire asagoo da' ahaan jiray 28.
Robin waxa uu shaqadaas ka tagay sideed sano kadib, hase ahaatee waxa uu markii ugu horraysay go'aansaday in uu iskiis u shaqaysto.
"Waxaan ahaa 36 jir, waxaan muddo igu filan u shaqaynayey dad kale, sidaas darteed waxaa ka fekeray in aan sidaas ku jiro inta noloshayda ka hartay, iyo inaan isku dayo in aan wax kale qabto".
"Arrintaasi waxay ahayd wixii ugu geesinimada badnaa ee Judy ay waligeed samayso, Eebbe ayaa ku mahadsan". Ayuu yiri.
Lahaanshaha sawirka Image copyrightROBIN HUTSON